Natiijadii Premier League: Liverpool, Chelsea, Swansea & Bournemouth Oo Guulo Gaadhay
HomeAfricaNatiijadii Premier League: Liverpool, Chelsea, Swansea & Bournemouth Oo Guulo Gaadhay
Kooxda difaacanaysa horyaalnimada Premier League ee Chelsea ayaa qaab ciyaareedkii yaabka lahaa ee ay baryahan soo bandhigaysay ku dartay wacdaro kale oo ay ku xasuuqday kooxda daalaa dhacaysa ee Stoke.
Goolal ay kala dhaliyeen xidigaha, Antonio Rudiger, Danny Drinkwater iyo Pedro ayay Chelsea awooda ciyaarta kula wareegtay 23 daqiiqo gudohood kulankan ka dhacayay geggida Stamford Bridge, waxaana goolal kale ugu sii kordhiyey, Willian iyo Davide Zappacosta qaybtii dambe si ay uga dhigaan 26 dhibcood, dhibcihii 33 ka ahaa ee ay Blues helli lahaayeen kulamadii ugu dambeeyey oo dhan, halka ay inta hogaanka ay kaga hayso Manchester City ku soo koobeen 13 dhibcood.
Kooxda tabobare Antonio Conte waxay ku soo ruqaansadeen kaalinta labaad, Booskan oo ay la wareegeen kadib markii Manchester United barbar dhac gool la’aan ah ay isku mari waayeen kooxda Southampton.
Swansea oo 1-0 ay kaga gacan sareysay kooxda Watford ilaa iyo daqiiqadii 86aad ee ciyaarta ayaa naqas ka soo booday kadib markii goolal ay u kala saxeexeen Jordan Ayew iyo Luciano Narsingh ay jawigii ciyaarta ugu wareejiyeen dhinaca kooxda uu tabobaraha u yahay Calvalhal.
Mohamed Salah ayaa ka dhigay goolasha uu xili ciyaareedkan ka dhaliyey horyaalka Premier League 17 gool kadib markii uu labada gool ee Liverpool ku karbaashtay Leicester, dhaliyey, iyadoo lagag horeeyo gool uu bilowgii ciyaartan ka dhacaysay geggida Anfield saxeexay Jamie Vardy.
Kooxda lagu naanayso Dhar-castu, waxay ku negaadeen kaalinta afraad ee liiska kala saraynta, waxaanay afar dhibcood ka sareeyaan kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo shanaad iyo lixaad kala fadhiya.
Ryan Fraser ayaa laba gool saxeexay, ciyaar Bournemouth, ay ku baday guuldaradii ugu horeysay tabobare Sam Allardyce intii uu ahaa macalinka Everton.
Kulanka isaguna gool la’aanta ku dhamaaday wuxuu ahaa ciyaartii dhex martay labada kooxood ee sanadkan uun ka soo gudbay heerka labaad ee Huddersfield iyo Burnley , si lamid ah sidii ay ku dhamaatay ciyaartii dhex martay kooxaha Newcastle iyo Brighton.
Chelsea Oo Guul Gaadhay Mourinho Dabaddii Iyo Hiddink Oo Goob Joog U Ahaa
”Kubbada Cagtu Way Dayacday Baadhitaanadii Daroogo Qaadashada”
’90 daqiiqo Oo Difaac Ah Waa Is Miidaamin’ Cesc Fabregas